Aqoon-yahan beeniyay inuu diray Fariin ka dhan ah Ra’isal Wasaaraha Cusub ee Somaliya – Radio Daljir
Oktoobar 7, 2012 6:45 b 0
Gaalkacyo, Oct-07- Aqoon-yahan Maxamed Maxamuud Cabdi ”Baldhe” oo ka mida aqoon-yahanada da’da yar ee ku sugan gudaha Puntland ayaa gaashaanka u daruuray inuu laanta-afka Soomaaliga ee BBCda uu u diray farriin uu ku dhaliilayo Ra’iisul wasaaraha cusub.
Mr; Baldhe oo maanta soo booqday xarunta daljir ee Gaalkacyo ayaa xusay inay dhici karto shakhsi kale oo magaca ay isaga egyihiin oo fariintaas gudbiyay balse uusan isago wax lug ah haba-yaraatee ku lahayn arintaasi, sidoo kalana au dhici karto qof kale oo magaciisa adeegsanaya doonayana dano kale oo u gaara ama uu ku dilayo sumcada uu ku dhex leeyahay bulshada dhexdeeda.
Aqoon-yahankan ayaa intaasi ku daray in aysan jirin fariin laga diray cod ama qoraal barta uu ka adeegsado Face-bookga ama taleefoonadiisa gacanta arintan uu ka helay taleefoono ku soo dhacayay saacadihii danbe iyo asxaabtiisa oo dhacdadaasi soo waydiiyay.
” Runtii aniga ma garan karo sida ay wax u dhaceen balse waxaan maqlay in nin magacayga adeegsanaya uu fariin ka dhan ah Ra;iisul wasaaraha cusub uu u gudbiyay BBCda taasina ay fejiciso ku noqotay, aniga ma garan karo wax aan ku diido Ra’iisul wasaaraha cusub waayo waa muwaadin u qalma xilkan”, ayuu yiri Baldhe.
Maxamed Cabdi Maxamuud ”Baldhe” ayaa taas badalkeeda kaga jawaabay soo dhawayn iyo hambalyo uu u fidinayo Ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax, wuxuuna sheegay in uu yahay shakhsi loo soo xushay booska awood-qaybsiga beelaha, isla markaana uu yahay nin ka soo bixi doona.
Hadalka Aqoon-yahan Maxamed Cabdi Maxamuud ”Baldhe” ayaa imaanaya xili markii ay soo baxday magacaabista wasiirka 1aad ee xukuumada federaaliga ee Soomaaliya ay BBCda fariin cod ah ka qabatay nin dhalin-yaraa oo sheegay inuu ku sugan yahay Puntland ayna ka soo horjeedaan magacaabista Mr; Saacid magaciisana uu ku sheegay Maxamed baldhe, taasoo buuq iyo guux fara badan ka dhalisay meelaha lagu kulmo iyo fagarayaasha dhalin-yarada ee Gaalkacyo.